नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा वकीलहरू - Law & More
सिद्धान्तमा, ऊर्जा कानून महत्वपूर्ण छ जब ऊर्जा किन्न, आपूर्ति वा उत्पन्न गरिएको छ। उर्जा आपूर्तिकर्ताका साथै कम्पनीहरू र निजी व्यक्तिहरूले यसमा भूमिका खेल्छन्। Law & Moreदिगो ऊर्जाको उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ विकासलगायत ऊर्जा कानूनमा भएका सबै घटनाक्रममा वकिलहरूले नियालिरहेका छन्।
ऊर्जा मालिकको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ?
> नयाँ ऊर्जा कानून
> ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको क्षेत्रमा कानून
> उत्सर्जन ट्रेडिंग र प्रमाणपत्र ट्रेडिंग
हाम्रो विशेषज्ञहरु को एक व्यापक अभिमुखीकरण छ, उनीहरु लाई ऊर्जा को सबै रूप मा ध्यान केन्द्रित। त्यसो भए, तेल, प्राकृतिक ग्यास, बिजुली, बायोमास र हावा र सौर्य ऊर्जा। यस व्यापक अभिमुखीकरणको कारणले गर्दा, हाम्रा ग्राहकहरू आपूर्तिकर्ता र उत्पादकका साथै उपभोक्ता, लगानीकर्ता र सामग्री तथा सेवाहरूको आपूर्तिकर्ता हुन्। अन्तमा, हामी औद्योगिक साइटहरूमा उपयोगिता आपूर्तिको क्षेत्रमा पनि काम गर्छौं, स्टीम र demineralised पानी जस्ता उत्पादनहरूलाई कभर गर्दै। त्यसोभए, तपाईंलाई ऊर्जा कानूनको क्षेत्रमा विशेषज्ञको आवश्यकता छ? Law & More दुबै आइन्डहोभन र एम्स्टर्डमबाट तपाईलाई निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ:
Heat तातो र ऊर्जा सम्झौताहरू ड्राइंग;
Energy ऊर्जा खरीद र बिक्रीको सम्बन्धमा सल्लाह प्रस्ताव गर्दै;
Energy ऊर्जा कानून र ऊर्जा सम्झौताको पालनाका सम्बन्धमा सल्लाह प्रदान गर्ने;
Sustain दिगो ऊर्जा नीति बनाउने सम्बन्धमा सल्लाह प्रदान गर्ने;
Efficiency ऊर्जा दक्षता योजनाहरू कोरेर;
Perm अनुमति र छुटहरूको लागि आवेदन;
E उत्सर्जन ट्रेडिंग र सर्टिफिकेट ट्रेडिंगमा सल्लाह प्रदान गर्दै।
जो एक वकील छ
सधैं मेरो लागि तयार हुन्छ,
साताको अन्त्यमा पनि "
नयाँ ऊर्जा कानून
आजको समाजमा उर्जा कानूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनकि हामी बिजुली, प्रकाश र तातो बिना गर्न सक्दैनौं। अधिकांश ऊर्जा अझै पनि तेल र ग्यास जस्ता जीवाश्म ईन्धनहरू द्वारा उत्पन्न गरिएको छ, तर यी ईन्धनहरू वातावरणको लागि खराब हुन्, साथै, तीहरू सकित छन्। हामी ऊर्जा समाप्त छैन र वातावरण सुधार गर्न यो कुरा सुनिश्चित गर्न, हामी अब वैकल्पिक उर्जा स्रोतहरू जस्तै पानी, हावा, सूर्यको किरण र बायोग्यास प्रयोग गर्न लागेका छौं। यी उर्जा स्रोतहरू भविष्यका हुन्, किनकि तिनीहरू पर्यावरणका लागि हानिकारक छैनन् र तिनीहरू अपुha्या हुन्छन्।
ऊर्जा कानून मा हाम्रो विशेषज्ञता
हामी हावा र सौर्य ऊर्जामा केन्द्रित उर्जा कानूनमा केन्द्रित छौं
दुवै डच र यूरोपियन कानून वातावरणीय कानूनमा लागु हुन्छन्। हामी तपाईंलाई सूचित र सल्लाह दिन्छौं
के तपाई उत्सर्जन ट्रेडमा विशेषज्ञ खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई अझै मद्दत गर्न खुशी छौं!
के तपाईं एकल ऊर्जाको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो विज्ञहरु तपाईलाई सहयोग गर्न खुशी छन्
भविष्य-प्रमाणित ऊर्जा र मौसम नीति अनुसरण गरेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न नेदरल्याण्ड्सले दिगो विकासको लागि ऊर्जा सम्झौता गरेको छ। यस सम्झौताको उद्देश्य नेदरल्याण्ड्स पूर्ण रूपमा दिगो ऊर्जालाई २०2050० सम्म सञ्चालन गर्नु हो। ऊर्जा सम्झौतामा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न उद्देश्यहरू छन् जसमा उनीहरूलाई ऊर्जा बचत गर्नु आवश्यक छ। थप रूपमा, डच सरकारले ऊर्जा क्षमताको सुधारको अनुगमन गर्न ठूलो संख्याका क्षेत्रहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौताहरू गरेको छ। यी सम्झौताको अंश भएका कम्पनीहरूका धेरै फाइदाहरू हुनेछन्: तिनीहरूले लागत बचत, बहुविध प्रक्रिया नवीनताहरू र एक स्थायी छविबाट लाभ उठाउँछन्। तर त्यहाँ बहु-वर्ष सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै दायित्वहरू पनि छन्। यी सम्झौताहरू जटिल छन् र ठूलो संख्यामा नियमहरू कोरिएका छन्। के तपाईंको कम्पनी पनि नयाँ नियमहरु द्वारा प्रभावित छ? सहि कानूनी समर्थन महत्त्वपूर्ण छ, ताकि तपाई कहाँ उभिनुभयो भनेर थाहा पाउनु पर्छ। कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More र हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं.
ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको क्षेत्रमा कानून
के तपाईं ऊर्जा को खरीद वा बिक्री संग सम्झौता गर्न छ? त्यसोभए तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ दुबै ओभर-द-काउन्टर र स्टक एक्सचेन्ज मार्फत बिजुली किन्न सक्नुहुन्छ। अत्यधिक-काउन्टर विधिसँगै कुनै पनि एक पार्टी दिवालिया हुन सक्छ, कानूनी समर्थन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि स्पष्ट सम्झौताहरू गरिन्छ ताकि अर्को पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दछ र आपूर्तिकर्ताले कुनै नोक्सान भोग्नुपर्दैन। Law & More यी गतिविधिहरूमा समर्थन प्रदान गर्दछ ताकि तपाईंलाई कुनै आश्चर्यको सामना गर्नुपर्दैन।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, बिजुली र ग्यासको आपूर्ति बिजुली वा ग्याँस नेटवर्क मार्फत हुन्छ। व्यक्ति वा कम्पनीहरू जसले अन्य उपभोक्ताहरूलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्छन् नेटवर्क अपरेटर नियुक्त गर्न बाध्य छन्। जहाँसम्म, यस नियमलाई अपवाद छन्: उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक बन्द वितरण प्रणाली वा एक सीधा लाइन को उपयोग, एक नेटवर्क अपरेटर नियुक्ति दायित्व लागू हुँदैन। बन्द वितरण प्रणाली एक व्यवसाय नेटवर्क हो जुन भौगोलिक रूपमा सीमित छ र केवल ग्राहकहरूको एक निश्चित संख्या हुन सक्छ। बन्द वितरण प्रणालीका मालिकहरूले नेटवर्क अपरेटरको तोकिएको दायित्वबाट छुटका लागि आवेदन दिन सक्दछन्। एक प्रत्यक्ष लाइन अवस्थित छ जब एक विद्युत लाइन वा ग्यास पाइपलाइन एक ऊर्जा निर्माता सीधा ऊर्जा को एक उपयोगकर्ता संग जोड्छ। एक सीधा लाइन नेटवर्क को हिस्सा होइन, त्यसैले यस अवस्थामा नेटवर्क अपरेटर नियुक्त गर्न कुनै बाध्यता छैन।
यदि तपाईं एक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता को हिस्सा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईं एक बन्द वितरण प्रणाली वा एक सीधा लाइन छ कि छैन निर्धारण गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। यो किनभने विभिन्न अधिकार र दायित्वहरु को आपूर्ति को दुबै प्रकार मा एक भूमिका खेल्छ। जे होस्, त्यहाँ अन्य पक्षहरू छन् जुन तपाईंले खातामा लिनु पर्छ। उदाहरण को लागी, ऊर्जा आपूर्तिकर्ताहरु लाई साना उपभोक्ताहरु लाई ग्यास र बिजुली आपूर्ति गर्न लाईसेन्स को आवश्यकता हुन सक्छ। थप रूपमा, ऊर्जा आपूर्तिकर्ताहरूले तातो ऐनबाट नियमहरू पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ, जसले परिणामस्वरूप तातो करारको निष्कर्षलाई असर गर्दछ।
तपाईंसँग ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको लागि उर्जा कानूनको बारेमा केहि प्रश्नहरू वा अनिश्चितताहरू छन्? त्यसपछि विशेषज्ञहरु मा कल गर्नुहोस् Law & More। हामी कम्पनीहरू र ग्यास र बिजुलीसँग काम गर्ने उपभोक्ताहरूलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्दछौं। चाहे तपाईं इजाजतपत्रको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ, एक ऊर्जा सम्झौता कोर्ने वा ऊर्जा व्यापार मेलामा भाग लिदै, हाम्रा विशेषज्ञहरू तपाईंको सेवामा छन्।
उत्सर्जन ट्रेडिंग र प्रमाणपत्र ट्रेडिंग
एक कम्पनी को रूप मा, के तपाई उत्सर्जन व्यापार वा प्रमाणपत्र ट्रेडिंग संग डील गर्न छ? तपाईंले हिसाब गर्नु पर्छ कति CO2 तपाईले प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन गर्नुहुन्छ, ताकि तपाईलाई उत्सर्जन अधिकारहरूको उचित मात्रा प्राप्त हुनेछ। यदि यो मामला हो जुन तपाईं अधिक उत्सर्जन गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईंको उत्पादनको खरीद बढाइएको छ, तपाईंलाई अतिरिक्त उत्सर्जन अधिकारको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंलाई धेरै ठूलो मात्रामा बिजुली चाहिन्छ भने, तपाईं प्रमाणपत्र ट्रेडमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। दुबै केसमा, Law & Moreवकीलहरू तपाईंको लागि काममा आउनेछन्। हाम्रा विशेषज्ञहरूले उत्सर्जन व्यापार र प्रमाणपत्र ट्रेडिंगमा फोकस गर्छन् र जान्दछन् कि तपाईंलाई कसरी सहयोग गर्ने यदि तपाईंले यससँग समस्याहरू अनुभव गर्नुभयो भने। त्यसोभए, के तपाईसँग उत्सर्जन अधिकारहरूको बारेमा केही प्रश्नहरू छन्? के तपाई उत्सर्जन परमिटको लागि आवेदन दिन चाहानुहुन्छ? वा तपाईलाई उत्सर्जन ट्रेडि or वा सर्टिफिकेट ट्रेडिंग सम्बन्धी सल्लाह चाहिन्छ? कृपया वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.